ပြည်သူတွေ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရရဲ့ “အောင်လံလွှင့်ချီ နွေ… – PVTV Myanmar
·5months ago ·50 Comments
ပြည်သူတွေ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရရဲ့ “အောင်လံလွှင့်ချီ နွေဦးထီ” အစီအစဉ်ကို ဒီကနေ့ စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ “အောင်လံလွှင့်ချီ နွေဦးထီ” ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ https://www.facebook.com/nuglottery မှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေ ထီထိုးလိုက်တဲ့ ငွေတွေထဲက ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို CDM တွေကို ထောက်ပံ့ဖို့ အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ ဆုကြေးငွေတွေအနေနဲ့ လစဉ် ထီဖွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဆုကြေးငွေကို မထုတ်ပဲ ပြန်လှူမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ့ ပြန်လည်လှူဒါန်းမှုအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG က ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ့ လှူဒါန်းငွေကို NUG ရဲ့ အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကို အထောက်အကူပြုမယ့် “အောင်လံလွှင့်ချီ နွေဦးထီ” အစီအစဉ်မှာ ဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲဆိုတာကို သရုပ်ဆောင် မြတ်နိုးအေးက ရှင်းပြထားတာ နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 55K Share – 15311
သု ည says:
2021-08-15 at 5:14 PM
ဒီနေ့အတွက် ကုန်သွားပါပြီ နောက်နေ့မှ ဆက်ထိုးလို့ရမှာ
Thandar Htay says:
2021-08-15 at 5:16 PM
ပြည်သူ မှာပြည်သူပဲရှိတယ် အားပေးကြမ်းတယ်နော် ဒီနေ့အတွက်မရတော့၁နာရီလေးပဲနော် မအလသိဘို့
キィー キィー ティー says:
ထိုးလို့မရဘူး Get Started နဲ့ တစ်နေရော
Suwai Phyo says:
2021-08-15 at 5:17 PM
Blue Markတော့ ရအောင် လုပ်ပါ
Khin Phyo Wai says:
Maung Wai Yan says:
2021-08-15 at 5:20 PM
ဒီနေ့ အတွက် ရောင်းကုန်တာမြန်တာ
Sai Kyaw Zaw Hein says:
တို့ တွေလည်း ထိုခြင်တယ်။ မလေးရှား agent မရှိဘူး လား ။တရာဝင် NUG agent. နော် ။
Eli Eli Eiei says:
2021-08-15 at 5:22 PM
အေ၇းေတာ္ ပုံ ေအာင္ ၇ မည္
Nway Oo Lily says:
2021-08-15 at 5:26 PM
တစ်‌စောင် ၂ ထောင်ထီထိုးဖို့ တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်
Ohn Myint Kyaw says:
2021-08-15 at 5:41 PM
ဘဏ်နဲ့ ငွေချေတော့ ကိုယ်ရဲ့ ဘဏ် အကောက်က စိတ်ချရပါသလား
Aung Zin Phyo says:
ပြည်ပကနေ ထိုးလို့ရအောင် လုပ်ပေးရင် အဆင်ပြေမယ်ဗျာ အားပေးချင်လို့ပါ
2021-08-15 at 5:47 PM
NUG ကို ပြည်တွင်းကနေ မိမိတတ်နိုင်သလောက် ဘယ်လိုထောက်ပံ့ရမလဲ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းရှာနေတာ
ဒီနေ့တော့ နွေဦးထီကို ထိုးဖို့နောက်ကျသွားလို့
2021-08-15 at 5:50 PM
ခရေ မြိုင် says:
ပြည်ပက ထိုးမရလို့မထိုးရပေ့မယ် တစ်နားရီအတွင်းကုန်သွားတယ်ကြားရလို့ ဝမ်းသာပါတယ် 😊😊
မအလ ကြီးတော့ ထိုင်ငိုနေလောက်ပြီ🤪🤪🤪
Phyowai Waikyaw says:
2021-08-15 at 5:52 PM
CDM တွေကို ထောက်ပံ့မယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ဘာထောက်ပံကြေးမှမရတဲ့ CDMတွေရှိနေကြပါတယ်
2021-08-15 at 5:57 PM
ထီထိုးချင်ပေမယ့် တစ်သောင်းမရှိလို့ 2/3စောင်ပဲတတ်နိုင်သူကြ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒါတော့အကန့်အသတ်မထားသင့်ဘူး လက်လုပ်လက်စား နေ့စားသမားတွေ ဘယ်လိုထိုးနိုင်မလဲ
2021-08-15 at 5:59 PM
ပြည်ပက လူတွေကိုလဲ ထိုးလို့ရအောင် စီစဥ်မူ့တွေပြုလုပ်ပေးပါ
Oo Nay says:
NUG ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအားပေးချက် ကတော့ 9plus ပဲထီထိုးဖို့ cb ဝင်ကြည့်တာ ယနေ့အတွက်ကုန်ပီတဲ့ 😢😢😢
Smile Smile Khin says:
San Lin Maung says:
2021-08-15 at 6:05 PM
စာ သား ညီ says:
2021-08-15 at 6:17 PM
ပြည်ပက လူတွေ ထီထိုးရအောင် လုပ်ပေးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ😢
Khun Htin says:
လှူဘို့ဟာ တကယ်မှ ရောက်ပါ့မလား
Aung Pyae Phyoe says:
2021-08-15 at 6:43 PM
သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မ
Mya Myint Mo says:
2021-08-15 at 6:48 PM
Ak San says:
2021-08-15 at 6:54 PM
ပြည်ပက ထိုးမယ်ဆိုရင် ကော ရလားဖြေပေးပါ Pls
can we use Singapore phone number ?
Žîñ Kô Lâtt says:
2021-08-15 at 7:20 PM
ပေါက်ဖို့ မလိုဘူး ထိုးရဖို့ပဲ လိုတယ်🥰
ပေါက်ခဲ့ရင်လဲ တစ် ြပားမချန် အကုန် ြပန် လှူ ပေးမယ်❣️
Phyu Ko says:
2021-08-15 at 7:37 PM
ဟိုဘက် ရပ်ကွက်ကလူတွေ ဒီပို့စ်တွေမြင်ပီး မုဒိတာပွားနိုင်ကြပါစေ😀🙃🤭🤭🤭
Ye Zaw Latt says:
2021-08-15 at 7:47 PM
ထိုးမယ် အခုလို့ရှင်းပြတော့ ပိုစိတ်ချရတာပေါ့ ..
Mahar Bo says:
2021-08-15 at 7:51 PM
ေနွဦး အတွက် 🤘🤘
Nora Htoo says:
ပြည်ပက ထို့လို့ပါသလားခ‌ဗျ။ အလင်းပြပေးပါဦး။ ပေါက်ဖို့မလိုပါဘူး။ အဓိက‌ေတာ့ ပူးပေါင်းပါ၀င်နိုင် ကျေနပ်ပါတယ်။
Saw El Kaw says:
2021-08-15 at 8:08 PM
၄း၄၅လောက်၀င်တာ sold outတဲ့။
Aye Min Soe says:
2021-08-15 at 8:15 PM
တိုးခ်င္တယ္ ၅ေဆာင္ေလာက္ ျပန္ဆက္ သြယ္ေပးပါ
Rynn KO says:
2021-08-15 at 8:36 PM
Cb မှာ ဘာမှ ပေါ်မလာဘူး
MinMin Oo says:
ေတာင္ဆိုပါတယ္ ျပည္ပကေန ထိုးလုိရေအာင္ စီစဥ္းေပးၾကပါ လူႀကီးမင္းမ်ား ထီဆို လူျဖစ္ထဲက မထိုးဖူးဘူး
2021-08-15 at 9:55 PM
Kbz. Pay ဖွင့်ရမှာလား
2021-08-15 at 10:07 PM
ထိုးမှာပါ ပေါက်လဲလှူမယ် အဆင်ပြေသွားပြီ
Aung Aungoo says:
2021-08-15 at 10:48 PM
တစ်စောင်၁၀၀၀နဲ့ အနည်းဆုံး ၃စောင်ထိုးနိင်မယ်ဆိုကောင်းမယ်ဗျာ။ နောက်ပြီး sein lucky လိုဆော့ဝဲလေးနဲ့ဆိုလဲကောင်းမယ်။
2021-08-15 at 10:50 PM
၄ နာရီ အား
တန်းစီ ပြင်မှ စောင့်
စာသား ရယ် မမြင်
ဘာမှား ငယ် ထင်ရင်း
နောက်တနေ့ သို့ ……
(ဘဝတူတွေ Fighting ဟေ့)
ေႏြဦးေတာ္ လွန္ေရး says:
2021-08-16 at 12:45 AM
ပြည်ပနိူင်ငံတွေက ဝယ်လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးကြပါ ဉပမာ ထိုင်း မလေးရှား စက်ာပူ နိူင်ငံတွေက ထိုးလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးချင်ပါတယ် ကျေးဇူပါ we support NUG government …အကြံဉာဏ်ပေးသက်သက်ပါ
မိုင္း မိုင္း says:
2021-08-16 at 7:46 AM
ေႏြဦးထီထိုးလို႔ အဖမ္းခံရရင္ ဘယ္သူတာဝန္ယူမွာလဲ?
CDMဝန်ထမ်းတွေ ထောက်ပံ့ကြေးရ မရ😅
Shema Chitthu says:
2021-08-16 at 8:28 AM
ထီ ဆိုင် သွားစရာ မလိုတော့ ဘူး
##ပညာရှိ အုပ်ချုပ်ရင် ##
အရာရာ အားလုံး ဟာ နိုင်ငံ ကြီးတွေ လို အဆင့်မြင့်မြင့် standard ရှိရှိ ပဲ , online ပညာရေးစနစ် , online lottery , online health , online စီးပွားရေး , အလုပ် တစ်ချို့ online ကနေ လုပ် တော့ , အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း သက်သာတာ ပေါ့ ။
# တို့ဘဝ တွေ တိုးတက် ဖို့
NUG ကိုထောက်ခံစို့ ##
Van Due La says:
2021-08-16 at 1:35 PM
Page လေးရှာမတွေ့လို့ ရှာတွေ့တဲ့ အကို အမများ link လေးချပေးပါ
Myat Kay says:
AprilApril သူများတွေက ထီထိုးပြီးကြကုန်ပြီ အခုမှထီထိုးနည်းသိတော့တယ်🤣🤣 လာကြည့်အုံး🤗
Soe Moe Naing says:
ပြောချင်တာက လူတိုင်းနီးပါး ထိုးလို့ရအောင်စီစဥ်ပေးရင် ကောင်းမှာနော်
ဒိလိုဗျ mobile banking မလုပ်ရသေးတဲ့ အခြေခံ လူတန်းစား များလည်း ထိုးလို့အဆင်ပြေမယ့်ပုံစံရယ်
ထိုးလို့ပေါက်ရင် လှူလို့လည်းရမယ် စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်း ဆုကြေးငွေထုတ်လို့ရမယ့်ပုံစံမျိူး ဒီကာလမှာ ကြပ်တည်းနေတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတေအတွက် ပါ အမှားပါရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျ
ကိုင်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မပါဝင်နှိုင်သူတွေက သူတို့ကိုယ် သူတို့
လဲပေါ်လာရော သူတို့ တဖက်
ပါတယ် ၊ငါတို့လဲ အုပ်တစ့်ခြပ်သဲတစ့်ပွင့်ပါဝင်ခွင့်ရပြီဆိုပြီး ဝမ်းသာကြပါတယ် ၊ဒါဟာ ပြည်သူကြားက ပြည်သူ့
ျမင့္ ေက်ာ္ says:
2021-08-18 at 2:02 PM
နွေဦး ထီ ထိုးခြင်တယ် နည်းလေးမျှဝေကြပါဦး
ဖုန်းနဲ့ ထိုးရမှာ အဝေးရောက်နေ၍